Kuyini ukumaketha kwe-Orchestration? | Martech Zone
Kuyini ukumaketha kwe-Orchestration?
ULwesine, April 23, 2020 ULwesine, April 23, 2020 Douglas Karr
Kunzima ukukholelwa ukuthi nginesikhathi esingakanani ngibhala ibhulogi yami, kepha ngiyathanda ukuthi ngivame ukubhekisa kokuthunyelwe okudala kanyekanye. Eminyakeni eyishumi edlule, ngabhala ukuthi abeluleki abasha bezindaba empeleni babefana kakhulu abaqhubi bomculo:
Abaqhubi akubona abaculi abangochwepheshe nganoma iyiphi insimbi eyodwa; kodwa-ke, baqonda ngokuphelele ukuthi bangayisebenzisa kanjani insimbi ngayinye, babenze basebenze ndawonye, ​​futhi benze umculo omnandi. Kubi kakhulu ukuthi asizibizanga njengabaqhubi bezokumaketha!
Shesha phambili namuhla, futhi ukumaketha kwe-orchestration manje sekuyigama elijwayelekile elisetshenziselwa ukuchaza ukuthi abathengisi bazisebenzisa kanjani izindlela ezahlukahlukene neziteshi ukwakha ukwazisa nokuzibandakanya nezithameli eziqondiswe kubo. Leli gama lisetshenziswa ngokuyinhloko lapho kuxoxwa Ukumaketha Okusekwe ku-Akhawunti ngoba ilitshe laziwa ngokuphelele bese kuthi kutholwa uchungechunge lwemicimbi ukushukumisa ithemba ngohambo lwamakhasimende, okubaholele ekuguqukeni.
Nakhu ukuthi i-Engagio, ipulatifomu yokukhangisa esekwe ku-akhawunti, ichaza kanjani ukumaketha kwe-orchestration:
I-orchestration yezokumaketha yindlela yokukhangisa engagxili ekulethweni kwemikhankaso ezimele, kepha kunalokho ekwenzeni ngcono isethi yokuxhumana okuhlobene kweziteshi lapho, uma kufakwa ndawonye, ​​kwakha umuzwa wamakhasimende owenzelwe umuntu ngamunye.
Ukuphinda usebenzise nokwandisa isu lokumaketha lesiteshi se-omni akukhawulelwanga ebhizinisini elisha, ungaphinde ucindezele imiyalezo nezikhangiso ngamathuba wokuthengisa nokuthengisa, ukuvuselelwa, noma ukuhlinzeka izindlela zamakhasimende zokuba ngabameli. I-Engagio yehlukanisa imidlalo ejwayelekile izigaba ezi-5:
Ukudlala Kwe-Orchestration Marketing
Inhloso Nokuzibandakanya - indlela enhle yokuqinisekisa ukuthi uzuza kakhulu kunhloso yakho nedatha yokuzibandakanya, yingakho igama. Zisebenzise lapho umthengi ongaba khona esesigabeni socwaningo nokutholwa.
Ukudlala kwe-Akhawunti Efanelekayo Yokukhangisa (MQA) - kusetshenziswe lapho i-akhawunti engaba khona ifinyelele iphuzu lomsebenzi owanele noma ukuzibandakanya ongathanda ukuthengisa ukuzibandakanya nabo.
Nyakazisa Ukudlala Kwesihlahla - lapho uke waba nethemba lokukhuluma nabathengisi, kepha bese kumnyama. Ukuyeka la mathemba kusho ukuyeka amadili angaba khona, ngakho-ke kuwufanele umzamo wokuzibandakanya kabusha.
Kuvaliwe Ukudlala Okuwinwe - Amakhasimende akhona alungele imidlalo ekhonjiwe yokwandisa inani elijwayelekile lekhasimende lakho. Kungabandakanya ukuvuselelwa, ukuthengiswa okuthengiswayo, i-upsell, kanye nokukhuthaza amakhasimende.
Kuvaliwe Ukudlala Okulahlekile - lapho isivumelwano siwela, lokhu kungakusiza ukuthi ufunde ukuthi wenzeni okungalungile ukuze ungaphindi amaphutha afanayo ngokuzayo. Zingasetshenziswa futhi ukubuyisa i-akhawunti esincintisana nayo.
I-Orchestration yinto engasabisa, kepha akudingeki ukuthi ibe njalo - indlela inamandla amakhulu futhi ibalulekile ekumaketheni okuzenzakalelayo nasekuthengiseni okususelwa ku-akhawunti (ABM).
Lokhu infographic evela Engagio ichaza izici ezahlukahlukene ngendlela elula yokulandela nokubuka. Ingabe uvulekile ukuthumela lokhu? I-Engagio ingajabula ukubhala okunye okuqukethwe okuzokuhambisana nakho.
I-orchestration yezentengiso ingaba yinkimbinkimbi. I-Engagio iphinde yaqhamuka nomhlahlandlela ozokukhombisa ukuthi ungawasebenzisa kanjani amaqembu akho akhona nezinhlelo zakho ukwenza i-ABM ibe lula futhi iphumelele. Baphinde bafaka nemidlalo yokudlala yokumaketha ehlelelwe i-18 ezokukhombisa hhayi ukuthi ungahlelela kanjani ukumaketha kwakho kuphela, kodwa nokuthi uzisebenzisa kanjani izinto ezishintshayo ukwenza i-orchestration ingabi namandla.
Landa i-Orchestration kanye ne-Next Generation of Automation
Tags: ukumaketha okusekelwe ku-akhawuntiukumaketha kwe-orchestrationizincwadi zokudlala ze-orchestrationi-orchestrationukudlala i-orchestration
I-Clearmob: Khulisa Ukusebenza Komkhankaso we-Facebook ku-Real-Time ene-AI
Izinzuzo eziyi-10 Zokwethembeka Kwekhasimende nezinhlelo Zemivuzo